Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, October 04, 2010 Monday, October 04, 2010 Labels: သုတအဖြာဖြာ
ကျွန်မ အလည်သွားရောက်ချင်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုအကြောင်း ပြောပြချင်ပါသေးတယ်ရှင် .. အဲဒီ နေရာလေးကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော် ကူမင်းမြို့နဲ့ ၁၂၀ ကီလိုမီတာ ( ၇၅မိုင်) နှစ်နာရီကျော်ခန့် ကားမောင်းရတဲ့ အကွာအဝေးမှာ တည်ရှိနေတဲ့ ကျောက်တုံးသစ်တော ( Stone Forest) ဖြစ်ပါတယ်။ ယူနန်ပြည်နယ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နယ်နမိတ်ခြင်း ထိစပ်နေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အနောက်ဘက်အကျဆုံး ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်..
အဲဒီကျောက်တုံးသစ်တောဆိုတာ ဆန်းကျယ်တဲ့ သဘာဝတရားအရ လူတွေရဲ့ ပြုပြင်ဖန်တီးမှုကြောင့် မဟုတ်ဘဲ သဘာဝအတိုင်း ထူးဆန်းစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကျောက်တုံး၊ ကျောက်ဆောင်တွေဟာ သစ်တောအုပ်ကြီးတစ်ခုပမာ ဧကပေါင်းများစွာ ကျယ်ဝန်းပြီး မျက်စိတဆုံး အံ့သြဖွယ် တည်ရှိနေပါတယ်.. ကျောက်ဆောင်တွေဟာ သစ်ပင်များသဖွယ် အပေါ်ကိုထောင်မတ်နေပြီး အရွယ်မျိုးစုံ ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့် မျက်စိပသာဒလဲဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့လဲ ကောင်းလှပါတယ်… ဘူမိဗေဒပညာရှင်များရဲ့ လေ့လာချက်အရ အဲဒီကျောက်တုံးတွေဟာ နှစ်သန်းပေါင်း ၂၇၀ခန့် သက်တမ်း ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်.. အဲဒီဒေသဟာ တစ်ချိန်က ပင်လယ်ပြင်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ပုံရပြီး နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက် တဖြေးဖြေး ပင်လယ်ရေများ နိမ့်ဆင်းသွားသောအခါ ထုံးကျောက်များဟာ ယခုမြင်တွေ့ရသော ကျောက်တုံး သစ်တောသဖွယ် ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံ ဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျောက်တုံးတွေဟာ နဂါးပုံ၊ ငှက်ပုံ၊ မျောက်ပုံ၊ ဆင်ပုံ၊ မှိုပွင့်ပုံ၊ မျှော်စင်ပုံ၊ ပိရမစ်၊ လူစသဖြင့် ပုံသဏ္ဍာန်များမှာ စုံလင်စွာဖြင့် စီကာရီကာ ဒေါင်လိုက် အနေအထားအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေတာကို တွေ့ရနိုင်ပါတယ်.. ကျောက်တုံး ကျောက်ဆောင်များဟာ ပေတစ်ရာမှ ၁၃၀ထိ အမြင့်ရှိပြီး အချို့ ကျောက်တုံးများမှာတော့ အင်အားပြင်း ငလျှင်ဒဏ်ကြောင့် နဂိုမူလပုံသဏ္ဍာန် မရှိတော့ဘဲ အပိုင်းပိုင်းပြတ်များ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး အချို့ကျောက်ဆောင်များမှာ ရေပတ်လည်ဝိုင်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကျောက်တုံး သစ်တောတည်ရှိရာ ဥယျာဉ်ကြီးကို ကျောက်တုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်များ၊ ကျယ်ဝန်းလှသော နယ်မြေဒေသ အနေအထားများအရ လေ့လာစရာ နေရာများကို အပိုင်းအလိုက် ခွဲခြားထားကြောင်း သိရပါတယ်. ကျောက်တုံး သစ်တောဥယျာဉ် ဧရိယာအတွင်းမှာဘဲ ထူးခြားဆန်းကျယ်သော ကျောက်လှိုင်ဂူကြီးများ၊ စမ်းချောင်းများ၊ ရေတံခွန်နဲ့ မြေအောက် မြစ်များ၊ သာယာလှပသော ရေကန်ကျယ်ကြီးများလည်း ရှိပါတယ်.. သဘာဝအတိုင်း လှပဆန်းကျယ်စွာ တည်ရှိနေတဲ့ တွေ့ရခဲသော မြင်ကွင်းဖြစ်တာကြောင့် ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ ယူနက်စကို အဖွဲ့ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်တုံးသစ်တောရဲ့ အပေါ်စီး မြင်ကွင်း
ယူနန်ဒေသမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်တွေရဲ့ အရောင်အသွေးစုံလင်လှတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုက နိုင်ငံခြားသားများအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်စေပါတယ်.. တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ရိုးသားအေးဆေးပြီး အလုပ်ကိုလဲ ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်လေ့ရှိသလို သီချင်းဆိုခြင်း ကခုန်ခြင်း တို့ကိုလဲ ၀ါသနာကြီးကြကာ သူတို့လူမျိုးစုတွေမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များလည်း များစွာရှိကြောင်း သိရပါတယ်.. တရုတ်ပြည်ရဲ့ အခြားဒေသများလို ရာသီဥတု ဆိုးဝါးခြင်းမရှိဘဲ ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့ဒေသ ဖြစ်တာကြောင့် ခရီးသွားရတာ အဆင်ပြေချောမွေ့ လွယ်ကူစေပြီး နေထိုင်ရတာ သက်သောင့်သက်သာ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်.. ကျောက်တုံးသစ်တောကို သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ အကောင်းဆုံးကာလဟာ စက်တင်ဘာလကနေ နောက်နှစ် မေလ အထိဖြစ်တယ်လို့ သိရပြီး ကားလမ်း၊ ရထားလမ်းတို့ဖြင့် အဆင်ပြေစွာ သွားရောက်နိုင်ကြပါတယ်.. ကျောက်တုံးသစ်တော အတွင်းမှာလည်း လက်ဆောင်ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်များစွာရှိပြီး ဆယ်စွယ်၊ သစ်သားတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော လက်မှုအနုပညာ ပစ္စည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ ရိုးဝတ်စုံများ၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ပန်းချီကားချပ်များ၊ အမှတ်တရပစ္စည်းများစွာကို ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်..
အရောင်အသွေးစုံတဲ့ တိုင်းရင်းသူ လှပျိုဖြူများ
ကျောက်တုံးသစ်တော ဥယျာဉ်ကြီးထဲကို ဒီလိုကားတွေနဲ့ လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုကြပါတယ်..
ကျောက်တုံးသစ်တော ဥယျာဉ်အတွင်း ၀င်ရောက် လည်ပတ်ကြည့်ရှုဖို့ ၀င်ကြေးက တစ်ယောက်ကို တရုတ်ငွေ ၁၇၅ယွမ် ဖြစ်ပြီး မြန်မာငွေ (၂၈,၀၀၀ - ၃၀,၀၀၀ ငွေဈေး အတက်အကျပေါ် မူတည်) ကျသင့်ပါတယ်။ ဒေသခံတွေရဲ့ အပြောအရ ကူမင်းကို ရောက်လာတဲ့သူဟာ ကျောက်တုံးသစ်တောကို မရောက်ဖူးလိုက်ဘဲ ပြန်သွားတယ်ဆိုရင် အလကား အချိန်ဖြုန်းတာနဲ့တူတယ်.. ကူမင်းကို ရောက်ရကျိုးတောင် မနပ်ဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ကျောက်တုံးသစ်တော တည်ရှိရာ ဥယျဉ်ကြီးကို ခရီးသွား လေ့လာသူများအတွက် မနက် ၈နာရီခွဲမှ ည ၆နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ပေးထားကြောင်း သိရပါတယ်. တစ်နှစ်ကို ခရီးသွားပေါင်း ၂သန်းကျော်ခန့် လာရောက် လေ့လာကြပြီး နိုင်ငံခြားသားများရော ပြည်တွင်းခရီးသွားများ အတွက်ပါ ဆွဲဆောင်မှု အားကောင်းလှတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.. ၄င်း ကျောက်တုံးသစ်တောကြီးဟာ အေဒီ ၁၃၀၀ခန့်က အုပ်စိုးခဲ့သော “မင်” မင်းဆက် လက်ထက်ကတည်းက လူသိများ ထင်ရှားတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ ယခုချိန်မှာလည်း ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ နံမည်အကျော်ဆုံး နေရာဒေသတစ်ခု ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားများစွာ လာရောက်ကြတဲ့နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်..
ဒီနေရာလေးကိုတော့ ကျွန်မစိတ်ဝင်စားမိတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုအဖြစ် ရွေးချယ်ပြီး အချက်အလက်များနဲ့ ဓာတ်ပုံများကို ရှာဖွေကာ ပြန်လည် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်ရှင်..
Photos and Sources from :
http://www.mywebsite.com and Google
32 Responses to “ကျောက်တုံးသစ်တောများ”
ကျောက်တုံးတွေက ပန်းပု ထုထားသလား မှတ်ရတယ် လှလိုက်တာ ။ ဈေးတော့ကြီးတယ်နော့် မြန်မာငွေနဲ့ ပြန်တွက်လိုက်တော့ ““စိတ်ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ဖွယ်”” အဲ့ကပုံလေးမှာ ရေကူးချင်စိတ်တောင်ဖြစ်သွားတယ် ။
ကယ်ကြပါဦးဗျို့ သွားနေရင်းနဲ့ ဘယ်ရောက်နေပြီလဲ မသိဘူး။ ဘေးမှာလဲ ကျောက်နံရံတွေချည်းပဲ။ ဝေး အေး ဟေး လာကြပါဦးဗျို့။ အနော် ဒီကျောက်တောင်တွေ ကြားမှာ လမ်းပျောက်နေလို့။ ဟေး ဘယ်သူတွေ ရှိလဲ ကယ်ကြပါဦးဗျို့၊
သဘာဝ အတိုင်း ဖြစ်နေတာဆိုတော့ လှလိုက်တာ
အရင်တုန်း က အသိတစ်ယောက် ယူနန်က ပြန်လာတုန်းက ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီး သွားချင်နေတာ
အခုလိုတော့ ရှုခင်းမစုံဘူးပေါ့ အခုက အပေါ်စီးကရော အဝေးကရောမကြည့်ဖုးဘူး
ပြည့် စုံ ပါပေတယ်ဗျာ...၊ မရောက်ဖူးတဲ့နေရာတစ်ခု အကြောင်း
စကားပြော လေးနဲ့ ရှင်းနေတာ ကိုယ့် ဘေး က ဂိုက် လိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့ အတိုင်း ပဲ။
( ဖတ်ရင်းနဲ့အဲ့ ဒီရောက်သွားတာ နော် )
အခုတော့ ဓါတ်ပုံတွေထဲကဘဲ လည်သွားတယ် လည်ပတ်ကြည်ရှုခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူး
ဒေါ်စည်းစိမ် ကတော့ သွားမယ်တဲ့ကျေးဇူးညီမ ရေ ကြည့်ချင်စရာသွားချင်စရာ ကြီးဘဲ
သွားလည်ချင်လိုက်တာနော် ...... :)
ဒေသခံ တိုင်းရင်းသူတွေက ချစ်စရာလေးတွေနော်။
အောက်ဆုံးဓါတ်ပုံတွေ မြင်တော့ မဖြစ်မနေ သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်မိတော့တယ်း)
ကားနဲ့ပါ ပါတ်လို့ရတာကို ပြောတာပါ။
လှတယ် ကျောက်တုံးသစ်တော သွားချင်မိတယ်..
ရှုခင်းလေးတွေကြည့်ပြီး စဉ်းစားမိတယ် ဒါကြောင့်ငယ်ငယ်ကကြည့်တဲ့
စွန်းဝူခုန်းကို သူတို့ ရိုက်လို့ ကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ ဟီး
စိတ်ဝင်စားစရာကြီးနော်။ သွားချင်လိုက်တာ။ တကယ့်ကို ပျော်စရာကြီးနေမှာ။
ဂွတ်တယ်... ဗဟုသုတရတယ်...း))))
အရင်က ပင်လယ်ရေအောက်မှာ ရှိခဲ့တာဆိုတော့ ရေအောက်ထဲမှာရှိတုန်းကလဲ ရေအောက် ကျောက်နန်းတော်ကြီး ဖြစ်နေမှာပဲနော်..။
ငါ့အမတို့များဟေ တကယ်ထဲ အမှတ်တရဆိုပြီး တစ်တုံးလောက်မခဲ့တာမဟုတ်ဘူး :)
ရေကန်တွေဘေးနားမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စာတစ်အုပ်ပြီးအောင်ထိုင်ဖတ်ချင်မိတယ်....။
ကျောက်တုံး ကျောက်တော ဆို ပိုမှန်မယ်ဏှော် :P ယူနန်ဆိုတာ တစ်ချိန်က သျှမ်းနယ်လေးပါ ယူတိနန် တဲ့ နေစရာပေါများတဲ့နေရာလို အဓိပ္ပါယ်ရတယ်
လှတော့လှတယ်။ တော်ကြာကိုယ်သွားတဲ့အချိန်ကျမှ ကျောက်တုံးတွေပြိုကျလာရင် အခက်ပဲလို့ ကြံကြံဖန်ဖန် တွေးမိနေတယ်။ :P
ချောရဲ့ ပို့စ်တွေက သိပ်ဗဟုသုတရတယ်။
ကျွန်မမသိတာတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာတွေကိုဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီဘလော့ဂ်က ဒိုကျူမန်ထရီ တွေလည်းရှိတယ်။ ဒရာမာတွေလည်းရှိတယ်။
ကျောက်တုံးသစ်တော ကိုလည်း သွားကြည့်ချင်မိတယ်နော်။
ထီပေါက်လို့ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို ကျောက်တုံးသစ်တောကို လိုက်ပို့မယ်နော်။း)
sofarsogood ရေ ကျောက်တုံးကျောက်တော ဆိုလဲ မှန်ပါတယ်..
ပြီးတော့ ယူနန်ဟာ ရှမ်းနယ်မြေဆိုတာလဲ မှန်ပါတယ်.. ခုချိန်ထိလဲ ရှမ်းလူမျိုးတွေ အများအပြားရှိနေဆဲ နေထိုင်ဆဲပါ။ ရှမ်းတွေ တည်ထားတဲ စေတီပုထိုးတွေလဲ အများအပြားရှိနေပါတယ်.. ပြီးတော့လဲ ရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့ ပွဲတော်တွေကိုလည်း အစိုးရက ရာသီအလိုက် ကျင်းပပေးနေဆဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်.. သင်္ကြန်လို ပွဲတွေတောင် ခုချိန်ထိ ကျင်းပနေတုန်းပါဘဲရှင်။
မချောရေ .. တူတူသွားလည်ရအောင်
အပေါ်စီးကရိုက်ထားတဲ့ပုံကြည့်ရတာ ကျောက်တုံးတွေအများကြီးပဲနော်၊ ကမ္ဘာကြီးက ထူးဆန်းတဲ့နေရာတွေပြည့်နေတာပဲ၊ ကမ္ဘာကြီးထဲက ထူးဆန်းတဲ့နေရာများဆိုပြီး စာအုပ်ထုတ်ပါလား၊ အဲဒီစာမူတွေစုထားပြီးလေ၊
အမရေ အထူးအဆန်းတွေကြီးပဲ :)
သွားချင်တာ.....ထီပေါက်ရင် သွားမယ်း)
Dennis Peyser said...
အလည် သွားလိုက်ပါတယ်.. (အတွေးနဲ့..ပြောတာပါ)
ဒီ ပို့စ် ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဆက်စပ်တွေးမိတာက ကျောက်တုံးတွေနဲ့သဘာဝအလှတရားကို နေအိမ်အတွင်းဒီဇိုင်းအတွင်း ခေါ်သွင်းလာတဲ့ Takashi Sugimoto ရဲ့ Super Potato ကို သတိရမိလိုက်သလို. ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ဖူးခဲ့တဲ့ စွန်းဝူခုန်းဇာတ်လမ်းနဲ့ ကွမ်ရင်မယ်တော် ဇာတ်လမ်းကို သတိရသွားမိတယ်...။း)
ခေါ်နော် မမး)